7 Nzira dzekuvimbisa Mutengi Centric Webhusaiti | Martech Zone
7 Nzira dzekuvimbisa Mutengi Centric Webhusaiti
China, Gumiguru 15, 2015 Ramba Drummond-Dunn
Ini ndanga ndichangobva kuongorora mamwe mawebhusayithi eCPG / FMCG uye nekushamisika kwandakaita! Aya ndiwo masangano ane mutengi muzita ravo chairo saka ivo vanofanirwa kuve ivo vatengi-centric, handiti? Zvakanaka hongu!
Uye zvakadaro mashoma acho anoita seanotora maonero evatengi pavanogadzira mawebhusaiti avo. Kunyangwe vashoma zvakakwana vanofara kundiita kuti ndide kudzokera kune webhusaiti yavo, chero nguva munguva pfupi!
Kubva pakuongorora kwangu kwenzvimbo dzinoverengeka, zvinoita sekunge masangano mazhinji anovaka mawebhusaiti avo kuti vagovane zvinhu nevatengi vavo. Nekudaro, irwo ruzivo ivo vanoda kugovera, kwete izvo vatengi vavo vangangoda kuve nazvo.
Izvi zvakaita kuti ndifunge nezve izvo zvingave zvakakosha, kubva kune mutengi maonero, kuisa pane webhusaiti. Heino runyorwa rwangu rwezvinhu zvinomwe, asi ini ndinogamuchira yako wega mazano kana kuwedzerwa mune zvakataurwa pazasi.
Izvo zvinhu zvinomwe ZVINOFANIRA kunge zviri paWebhusaiti
Chimiro chakajeka icho chiri nzwisisa. Iwe unofanirwa kunge uchisanganisira mepu yeavo vanoda rumwe rubatsiro kana avo vasina musoro mukutsvaga kwavo.
Zviri nyore kuwana zvinongedzo zvekubatana, kana izere ruzivo rwekambani pane peji rekumba. Izvi zvinofanirwa kusanganisira manhamba efoni, email, kero dzepositi nedzemugwagwa, uye mifananidzo yemagariro. Iwe unofanirwa kugara uchiziva kuti mazuva ano, vatengi vanowanzo enda kune webhusaiti kuti vazive maitiro ekubata a brand kana kambani. Naizvozvo ita kuti zvive nyore sezvinobvira kwavari.
Chinyorwa chemhando dzako, zvigadzirwa uye masevhisi. Sezvo vatengi vachifunga mabhendi pamberi pezvikamu, sanganisira mifananidzo yavo, pamwe neakakodzera madhisheni akadai sepakiti zvemukati uye zvigadzirwa. Wedzera mazano ekushandisa, kunyanya kana paine chero panogumira, uye neruzivo rwekuti ungaiwana kupi, kunyanya kana kugovera kuchirambidzwa. Aya ndiwo echokwadi echokwadi kusanganisa, asi chokwadika iwe unogona kusanganisira zvimwe zvinongedzo iwe zvaunoziva zvingave zvinonakidza uye zvakakosha kuti vatengi vako vazive.
An nezve chikamu chinoratidza ruzivo rwekambani, kusanganisira yavo manejimendi timu - kwete (chete) ivo vasiri-vakuru vatungamiriri. Kana iwe uri kambani yepasirese, wedzera nzvimbo dzenzvimbo dzaunovhara uye wopa sarudzo yemitauro pane peji rekutanga. Chirevo chekambani yekutumwa, kukosha kwayo, zano uye tsika zvakakoshawo kugovana nekubatsira kuvaka mufananidzo wakanaka nevatengi. Kunyangwe iwe uchifanira kuve nechikamu chezvenhau chevatapi venhau uye vezvemari, vatengi zvakare vanofarira kuziva zviri kuitika nemhando dzavanofarira, saka wedzera chikamu chenhau nenyaya dzazvino.
Zvinokosha zvemukati kubva mumaonero evatengi. Iyo saiti inofanirwa kugara ichigadziriswa uye iine cross-browser kuenderana newebhu-inoshamwaridzika mifananidzo. Sezvo mafoto nemavhidhiyo chiri chimwe chezvinhu zvinozivikanwa kwazvo zvewebhu, zvinosanganisira ivo kana kukoka vatengi vako kuti vawedzere yavo.
Purina rave rave kufarira nzvimbo saiti nekuda kweayo mushandisi-inogadzirwa zvemukati, kwairi iyo zvakare inowedzera yayo yazvino TVC uye kudhinda kushambadzira. Vanhu vanofarira kutarisa, kupindura uye kugovana zvinhu zvitsva, saka zviite nyore kuti vaite uye vanokumbira kuti ugare uchidzoka kuzhau dzichangoburwa.
Chikamu che FAQ chine mibvunzo inowanzo bvunzwa. Iyi nharaunda inodawo kugara ichivandudzwa nemibvunzo inouya mumitsara yekuchengetedza uye timu yemabasa evatengi.
Zvishandiso zvakadai sekutsvaga, kusaina uye kunyorera mafomu, uye RSS feed yevatengi vako zvakakosha kuwedzera, kuvabatsira kuwana zvakanakisa kubva pane yako saiti zvemukati. Uye zvakare, yekutevera uye yekuongorora makodhi kunogonesa iwe kutevedzera kupi uye izvo izvo vatengi vako vanotarisisa kazhinji. Izvi zvinopa rumwe ruzivo kupfuura rwakawanikwa nekubvunza vatengi vako zvakananga, izvo zvikamu zvinoda kudzokororwa kana kutsiviwa.
Muenzaniso wakanaka wekurudziro
Imwe yemawebhusaiti ari nani emakambani andakawana uye zvinova zvinonakidza kwazvo kusangana nawo, ndiyo saiti ye Reckitt Benckiser. Iyo yaifarira chaizvo uye yakandibata kwenguva yakati uye munzvimbo zhinji dzakasiyana. Semuenzaniso, pachinzvimbo chenguva dzose runyorwa rwemhando dzayo uye marogo avo, inoratidza icho chainodaidza kuti Powerbrand mutsara-up unoratidzwa pasherufu rekutengesa kana mumakamuri eimba chaiyo (ndinobvuma kuti mhere mhere yakanditsamwisa, asi unogona kudzima). Unogona kudzvanya pamufananidzo wechigadzirwa kuti uwane rumwe ruzivo pairi, chikamu uye kushambadzira kwayo kwazvino.
Kukoka vateereri kutora chikamu kunokurudzira vanhu kudzvanya pane ese mabhii kuti vazive zvakawanda nezvavo. Uye kuratidzira kwekudyidzana kweReckitt Benckiser yemakambani epasirese, kuburikidza nekuwedzera kwemitambo nematambudziko, zvinowedzera kukwidza, kwete kune vatengi chete, asi zvakare vekare, varipo nevangangove vashandi.
Tarisa uone yavo saiti yakabatana pamusoro uye uienzanise neyako webhusaiti webhusaiti. Ndeupi waungade kushandisa nguva pane? Yako saiti ndeye yemubatanidzwa kana yevatengi-centric imwe? Une zvinhu zvese zvinomwe zvataurwa pamusoro apa kune yako webhusaiti? Kana zvisiri, inguva yekufunga mutengi kutanga.
Denyse ane makore anopfuura makumi matatu 'ruzivo mumabasa epamusoro ekutungamira naNestle, Gillette naPhilip Morris International. Akavamba uye ari Mutungamiri weC³Centricity, kubvunzana kwepasirese kunopa zano rehunyanzvi kumatimu makuru emabhiriyoni-madhora emagetsi. Bhuku rake razvino Kukunda Mutengi Centricity rave kuwanikwa.
5 Inopindirana Email Dhizaini Elements izvo zvinowedzera Dzvanya-Kuburikidza Nemitengo